नेकपा एमालेका चर्चित नेताले दिए राजिनामा, को हुन् उनि ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
नेकपा एमालेका चर्चित नेताले दिए राजिनामा, को हुन् उनि ?
नेकपा एमालेका एक चर्चित नेताले पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
उनले पार्टीको साधारण सदस्यमा भने रहने बताए। नेता यादवले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको निर्वाचनमा भएका गतिविधिबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले प्रतिनिधि छनोटका क्रममा भएका गतिविधिको छानबिन र समीक्षा गर्न समेत नेतृत्वसमक्ष आग्रह गरेका छन्। यादवले आफुलाई जिल्लामा काम गर्न पार्टी अध्यक्ष शिवराज सुवेदीबाट असहयोग भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
उनले जिल्ला पार्टीका अध्यक्षबाट आफूलाई असहयोग भएको दाबी गर्दै ३ महिनाअघि नै पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई जानकारी गराएको पत्रकार सम्मेलन जानकारी दिए।
अमेरिककाप्रति कुनै एलर्जी छैन। उनले छिटै अल पार्टी मिटिङ बसेर समस्या समाधान गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या अदालतभित्रबाटै हल हुनुपर्ने बताए ।